YEYINTNGE(ကနေဒါ): UN Secretary General's noon briefings - extracts on Myanmar ဘာသာပြန်
UN Secretary General's noon briefings - extracts on Myanmar ဘာသာပြန်
The UN Country Team in Myanmar remains deeply concerned over the continued loss of life following the military takeover of the Government on 1 February. At least 224 civilians have been killed at the hands of security forces, according to the UN Human Rights Office, including while in custody. We believe the real figure could be more than 250.
Hundreds more people, including women and children, have been injured. Our colleagues continue to call on the military to halt the use of force against peaceful protestors. The team is also very concerned over further efforts to undermine freedom of expression, with increased pressure on independent media outlets. To date, at least 40 journalists have been arrested.
၂၂ ရက် မတ်လ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းယူလိုက်သည့် ဖဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးရမှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေမှုအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေဖြင့် ၎င်း၏ နက်ရှိုင်းသော စိုးရိမ်မှုများကို ဆက်လက် ဖော်ပြပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရုံး၏ အဆိုရ ဖမ်းဆီးခံသည့်အချိန်အပါအဝင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏လက်အတွင်း အရပ်သား ၂၂၄ ယောက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ရှိသော သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ အယောက် ၂၅၀ထက် ပိုမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များအပါအဝင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူများသည်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရများ ရရှိကြပြီးဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအပေါ် အင်အားသုံး ဟန့်တားမှုကို ရပ်တန့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက စစ်တပ်အား ဆက်လက်တောင်းဆိုလျက်ရှိကြပါသည်။ ထို့အပြင် လွတ်လပ်သည့် သတင်းမီဒီယာများအပေါ် ဖိအားများ ပိုမိုပေးခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကို လျော့ပါး အားနည်းစေရန် ထပ်မံအားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ်တွင်လည်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးအနေဖြင့် အလွန် စိုးရိမ်ပါသည်။ ယနေ့အထိစာရင်းများအရ အနည်းဆုံး သတင်းထောက်အယောက် ၄၀ ဖမ်းဆီးခံထား ရပြီးဖြစ်သည်။